လကုန်ပိုင်းတွင် ၁၂ လက်မ MacBook တင်ပို့မှု | ငါက Mac ပါ
မနေ့က ၁၂ လက်မအရွယ်နှင်းဆီရွှေရောင်ရှိသည့် MacBook အသစ်၊ Intel Skylike ပရိုဆက်ဆာအသစ်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်တိုးတက်မှုကိုယ်ပိုင် Apple စတိုးသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, MacBook Air ၏ဖွဲ့စည်းမှုအရရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကပြောဆိုခဲ့သည် ဤဆောင်းပါး၌ Pedro Rodas။ ဒါပေမယ့်အစပိုင်းမှာတော့၊ ငါတို့သတင်းကြားတာနဲ့ MacBook ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အခြားတိုးတက်မှုများကိုစစ်ဆေးဖို့ Apple ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားခဲ့တယ် အက်ပဲလ်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကသိပ်မကောင်းပါဘူး.
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အရာရာတိုင်းရှိနေပြီ ဖြစ်၍ စွမ်းအားအရှိဆုံးသောဖွဲ့စည်းမှုပါရှိသည့် ၁၂ လက်မ MacBook အသစ်တစ်လုံးကိုမည်သို့လှောင်ပြောင် ၀ ယ်ယူခဲ့သနည်း။ monthပြီလယခုလကုန်တွင်ပေးပို့ချိန်။ ယခုအသစ်ပြုလုပ်ထားသော MacBook (2016 အစောပိုင်း) ၏ရောင်းအားမည်သို့မည်ပုံကျန်ရှိနေသည်ကိုစောင့်ကြည့်ရ ဦး မည်ဖြစ်သည်။
တင်ပို့ရောင်းချမှုများနှင့်အခြားကိစ္စရပ်များတွင်အက်ပဲသည်အက်ပဲလ်သည်ပို့ဆောင်သည့်နေ့ကိုအမြင့်ဆုံးသို့တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆက်လက်ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်ချိန်က၎င်းထုတ်ကုန်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပြီးတစ်ပတ်အကြာတွင်တင်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်မကြာသေးမီကသက်တမ်းတိုးခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ရှိသည်။ ယခုဤသည်သာ။ ပုံမှန်ပါပဲ.
အမှန်တရားမှာအသစ်ပြန်လည် MacBook မော်ဒယ်သည်နှင်းဆီရွှေအရောင်သစ် မှလွဲ၍ အပြင်ပန်းသွင်ပြင်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်သည့်အပြင်၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ပို့ကုန်များ၏စင်မြင့်အပေါ်တိုက်ရိုက်သြဇာသက်ရောက်သည်။ သို့သော်ငြားလည်း ကျနော်တို့ကြိုတင်မှာကြားထားတိုးတက်ဘယ်လိုမြင်ပါလိမ့်မယ် အကယ်၍ ယင်းတို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြပါကသူတို့၏တင်ပို့မှုကိုအနည်းငယ် ပို၍ နှောင့်နှေးစေမည်မှာသေချာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » MacBook » လကုန်ပိုင်းတွင် ၁၂ လက်မ MacBook တင်ပို့မှု